लकडाउनमा साहित्यकार : शृंखला ३ – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
लकडाउनमा साहित्यकार : शृंखला ३
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:०३
आजको शृंखलामा हामीसँग घनश्याम पथिक, शैलेन्द्र अधिकारी र शम्भु सुस्केरा हुनुहुन्छ ।
घनश्याम पथिक एक चर्चित साहित्यकार हुन् । उनका युनिका (उपन्यास-२०७२), सहर तिम्रो भए (गजल संग्रह-२०६५), भूल जिन्दगीको (गजल-२०६९), पहेँलो फूल र स्वप्ना (कविता संग्रह-२०६६) र अहिले भर्खरै आएको ‘छुई’ प्रकाशित छन्। उनि पहिले नै उपन्यास युनिका मार्फत सबैको प्रिय हुन सफल भएको र अहिले छुई पनि युवाहरुले मन पराएका छन् ।
“सामाजिक सञ्जाल नहेरूँ भन्दा नि हुन्न, समाचार पनि हेर्ने / सुन्ने बानी छ । दुवैले मुटु निचोरेर ल्याउँछन् । आँखा रसाउँछन्। यो भयावह स्थितिमा सिर्जनातिर त सोच्न पनि मन लाग्दैन । ज्यान बाच्यो भने पछि लेखौँला भन्ने सोचाई आउँछ । समय नै खै के आयो – आयो । जोगिएर बस्न गाह्रो छ । कुन बेला कोरोनाले भेट्छ भन्ने त्राहिमाम मात्र छ । होसियारी अपनाउनमा नै दिन कटिरहेका छन् ।
यस्तै दिनचर्याको बीच – बीचमा छुई पढ्ने पाठकहरू जोडिनुहुन्छ । केहिछिनलाई जोडिने पाठक र म नै कोरोनालाई बिर्सेर छुईको गफमा हराउँछौ । छुईको प्रतिक्रियाले मन पुलकित हुन्छ । फेरि अर्को पाठकले “कोरोनाले गर्दा छुई लिन पाएको छैन केही उपाय छ भने भन्दिनु न” भन्नुहुन्छ । मन न्यास्रिन्छ । उपाय के नै छ र ? कोरोना जाओस् है ल भन्छु ।
बेला – बेला त लाग्छ , धन्य छुई विमोचन गरिएछ । नत्र गत वर्ष झैँ हुने रहेछ । गत वर्ष वैशाखमा विमोचन गर्ने योजना थियो । यहि कोरोनाले धकेलेको थियो । यसपालि पनि कसो कसो कोरोना भन्दा अलिक छिटो भइएछ । नत्र ….. मन गज्जबले बुझ्छ ।
घरमा साना बच्चा हुँदा समय गएको पत्तै नहुदोरहेछ । छोरो छ साढे तीन वर्षको । उसका अन्जान चकचक नियालेर, मालुम प्रश्नका उत्तर दिँदादिँदै दिन त ढलिहाल्छ । फेरि मेरो पेशा प्राध्यापन हो । केही समय अनलाइन कक्षाका लागि पनि छुट्याउनु छँदै छ ।
यस्तै छ मेरो कोरोना कहर भाग – दुई ।
सम्पूर्ण महानुभावमा एउटै अनुरोध छ – सबै प्रावधान अपनाएर कोरोना लाग्नबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाऔँ । सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै कोरोनाले भेट्यो भने आत्मबल उच्च राखेर उपचार गरौँ । पक्का पनि कोरोना पराजित हुने छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो बाच्नु / बचाउनु हो । त्यसपछि त बाँकी कुरा छदैछ ।”
लेखक शैलेन्द्र अधिकारीको प्रकाशित पुस्तकहरूमा दिन रोएपछि (गजल सङ्ग्रह -2064),हिउँ माथिको जून (गजल सङ्ग्रह – 2066), ‘उलार’ उपन्यासको शैलीवैज्ञानिक अध्ययन (समालोचना – 2071) र भर्खरै मात्र आएको ‘निर्वेद’ (उपन्यास -2076) पर्दछन् जुन अहिले एकदम नै चर्चामा छ । अधिकारी लेखनसँगै पेशाले शिक्षक पनि हुन् । उनी नेपाली साहित्य पढाउँछन् ।
“लकडाउन हुनुभन्दा केही समय पहिले परिवारहरू धादिङ घर गए । अहिले काठमाडौँमा म एक्लै छु । बिहान र दिउँसो हरेक दिन केही समय कलेजका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन पढाउँछु । केही समय त्यसैमा अल्मलिन्छु । अनलाइन शिक्षण आफ्ना लागि पनि नयाँनयाँ नै भएकाले यस्तो शिक्षण सिकाइ कसरी प्रभावकारी हुन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालतिर पनि खोज्ने गर्छु । बाहिरतिर के गर्दा रहेछन्, थाहा पाउँन युट्युबतिर कहिलेकाहीँ समय दिन्छु । केही समय धादिङ गएका छोरछोरी र परिवारसँग गफगाफ गर्छु ।
२०७६ सालमा निर्वेद उपन्यास बजारमा आएपछि, नयाँ कथा सङ्ग्रहमा काम गरिरहेको थिएँ । तर बिहान दिउँसो कलेज पढाउनुपर्ने हुँदा सोचेजस्तो समय दिन सकिरहेको थिइनँ । अहिले कथा सङ्ग्रहमा काम गर्ने अवसर मिलेको छ भन्दा पनि हुन्छ । अबको केही समय आफ्ना तर्फबाट अब आउने कथा सङ्ग्रहलाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा नै अलि बढी समय खर्च गर्दैछु । यो कोरोना महामारी सकिएपछि नयाँ कथा सङ्ग्रहका साथ पाठकका माझमा आउने कुरा पनि निवेदन गर्दछु । अलि अगाडि नै पूरा गर्छु भनेर जिम्मा लिएका केही मित्रहरूका कृतिको सम्पादन पनि यही बिचमा पूरा गर्दैछु ।
कि लेख्ने, कि पढ्ने, कि पढाउने यही तीन कुराको सेरोफेरोमा हालसम्म बित्यो । यो लकडाउनमा पनि म यही तिन कुराकै सेरोफेरोमा छु । तुलसी दिवसको ‘नेपाली लोककथा’, सौरभको ‘असहमति ३’ र रोशन थापा निरवको ‘कोष्ठकभित्र हाँसो’ किताब पढ्दैछु । कोरोनाको सङ्क्रमण र राजनीतिको सङ्क्रमण बुझ्न बेलाबेला सामाजिक सञ्जालतिर पनि अल्मलिन्छु ।”
शम्भु सुस्केरा पेशाले प्रहरी हुन् तर उनी साहित्यसँग एकदम नै नजिक छन् उनलाई मान्छेहरूले प्रहरी भन्दा बढी साहित्यकार भनेर चिन्ने गर्छन् । सुस्केराका प्रकाशित कृतिहरूमा “शहीदकी आमा” र “सरोगेट लोग्ने” कथा सङ्ग्रह, प्रहरी जवानका लागि लोकसेवाको तयारी पुस्तक र “प्रहरी जवान गाइडलाइन” हुन् । प्रहरीले सञ्चालन गरेको रेडियोको साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा उनको आवाज सुन्न पाइन्छ । युवा लेखकहरूलाई एकदम नै माया र प्रोत्साहन गर्ने उनको बानीले उनी सबैका प्रिय छन् ।
“०७७ को कोभिडले भन्दा ०७८ को कोभिडले सात्तो खाएको छ । रोग र भोकले जनजीवन तङ्ग्रिदै गर्दा । फेरि फर्किएर आयो त्यो । के पुगेन र आएको हो । स्वस्थानीका ब्राह्मणहरू लावण्य देशका राजा नवराजकहाँ फर्केर आए जस्तै आएको छ । कसलाई लैजान बिर्सिएर गएको थियो र यमराजको गाली खाएर फर्किएको हो ।
आएकोमा चिन्ता भन्दा पनि उसैलाई मद्दत गरेर हामीलाई निरिह अभिभावकका कारण पो डर छ मनमा ।
पोहोरको कोरोना सामना गर्दा म प्रहरी भएर बाँचेको थिएँ । परिवार र जागिर जिम्मेवारी गरी दोहोरो थियो जिम्मेवारी । अहिले एकल छ । परिवारको मात्रै छ चिन्ता ।
द्वन्दकालमाजागिर छाड्ने पारिवारिक दबाब भए पनि छोडिनँ । डरले छोड्यो भन्लान भन्ने पिरले । अहिले कोरोना सकिएपछि बिसाएको हुँ टेको । कोरोनाका डरले घरमै लुक्न बिसायो भन्लान् भन्ने पीर छ ।
कोरोनाको सामाजिक, मानसिक, आपराधिक र बाल मनिविज्ञान र बाल आत्म हत्याकाबारेमा केही लेखियो ०७७ मा ।
बाध्यकारी थियो लेखाइ । हरेक दिन ट्राफिक एफएममा पढिने समाचारले साह्रै मन दुखाएर लेखिएको थियो । लेखौँ लागेर होइन । लेख्न पाए केही सजगता बढाउन सकिन्थ्यो की भन्ने कर्तव्य बोधले लेखियो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने साहित्य लेख्नै सकिएन । पढ्ने कुरा गर्दा पोहोरको मदन पुरस्कारवाला पनि पढि सकिएन आधैमा रोकियो ।
पढ्न छाडेर जीवनले गति लेला जस्तो लाग्दैन । तर गैह्र साहित्यले मन छुन थालेको छ । आफैले आफ्नो जीवनलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएर पो हो की ? मोटिभेसनल खालका पुस्तकहरू पढ्ने रुची बढेको छ । बालबालिका सम्बन्धी पुस्तक पढ्ने बाध्यता थपिएको छ ।
हाँसो र आँसु मात्रैले सधैँ काम नदिने पो होकी ? जगदीस घिमिरेको अन्तर्मनको यात्राले जति अरू नेपाली साहित्यले प्रेरित गरेको छैन । स्वादका हिसाबले अरू धेरै राम्रा पुस्तक पढेँ । सायद बिपदकाबेला सान्त्वना र प्रेरणा दिने खालका पुस्तक साहित्य कम गैह्रसाहित्य बढी हुने होकी ? वा मैले अनुभव हासिल गर्न नसकेको हो की ।
जीवन र जगत, हाँसो र आँसु मात्रैको अध्ययनले बिपद वा बिचलनकाबेला आत्मबल दिन नसक्ने रहेछ जस्तो लागेको छ ।
बिपदका घडिमा कसरी पार लगाउने जिन्दगीलाई । यस्ता पुस्तक कुनै नेपाली लेखकले लेखिदिए ? आफैँले लेख्न पाए ? भन्ने लोभ छ ।
यस्ता पुस्तक दिन नसकेकाले पो डिजिटलले पुस्तकलाई धुलो चटाएको होला । यस्तै सोचमा समय बितेको छ ।
लेख्ने विषयलाई डायरीमा नोट गर्दै र नलेख्दै समय बितिरहेको छ । सहरिया, अस्तव्यस्त जीवन भोगिरहेको म र मेरो मनलाई कसरी स्थिर गराउने, सकारात्मक सोचको विकास कसरी गराउने, योग र ध्यानको शक्तिमा कसरी साक्षात्कार गराउने ? अवचेतन मनको शक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने यता पो जाँदो छ मन ।
बाह्र वर्ष अघि सुडान बस्दाको संस्मरण लेखिसकेको दुई वर्ष भयो समय र मन दुवै सकारात्मक नहुँदा थन्किएर बसेको छ । प्रकाशकले पनि भन्न थाले अब पुरानो हिसाब बिर्सिनुस् ।
मान्छेले पुस्तक किन्न र पढ्न छोडे, मोबाइल र ल्यापटपमा छन् सबैका आँखा । त्यहीँ छिरेर पो केही भन्ने हो की ? युट्युबमा पो लेखिनुपर्ने हो की आफूलाई ?
कलम र आवाज यता चल्न थालेको छ आजकाल । आवाजमा चेतना पढ्ने समय आयो भन्छन् मान्छे । त्यहाँ पनि समय लेख्न र बेच्न सकिएन भने के गर्ने होला ?
साहित्यका यिनै विषय मन्थनको पात्र बनेर समयको स्यानिटाइजर र मास्क जिन्दगी भोगिरहेको छ मेरो कलम । थाहा छैन कोरोना साहित्य लेख्न की मेट्न मद्दत गर्नेछ ।”
बिटक्वाइनलाई टेस्लाले स्वीकार नगर्ने
भित्रियो १८ हजार खाली अक्सिजन सिलिन्डर